musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nzvimbo dzakanakisa dzepasirese dzekutenga imba nyowani yezororo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Seguta guru rekuchamhembe kweItaly dunhu reVeneto, Venice inonzi nhamba yekutanga hotspot yezororo munyika.
Chidzidzo chitsva chakaongorora nzvimbo dzakakurumbira pasirese pazvinhu zvakaita sezvinhu zvekuita, kugona, kuwanda kwematsotsi uye mamiriro ekunze enzvimbo.
Zvibodzwa zvakayerwa zvakabva zvagadzirwa uye nyika yega yega yakaverengerwa.
Nzvimbo gumi dzepamusoro dzekutenga imba yezororo kutenderera pasirese
chinzvimbo Enda Zvinhu zvekuita pa10,000 vanhu Maresitorendi pa10,000 vanhu Crime Index zvibodzwa Avhareji yemutengo wepamwedzi wekurarama kumhuri yevana (USD) Avhareji mutengo wepfuma pa m2 (USD) Tembiricha yeavhareji (˚C) Avhareji yemvura inonaya pamwedzi (mm) Zvibodzwa zvese /10
1 Venice, Italy 358 2,628 31.63 $3,691 $4,930 13.1 64.2 6.92
2 Paphos, Kupro 115 1,511 28.38 $2,560 $1,837 19.2 32.2 6.91
3 Abu Dhabi, UAE 5 231 12.04 $2,865 $2,836 27.6 10.8 6.70
4 Dubai, UAE 11 404 16.34 $3,191 $2,877 27.6 13.3 6.57
5 Funchal, Portugal 45 637 14.80 $2,335 $2,053 19.3 58.3 6.41
6 Corfu, Girisi 74 1,322 19.45 $2,910 $1,647 17.2 85.0 6.28
7 Las Palmas de Gran Canaria, Spain 12 476 26.08 $2,409 $2,912 21.3 13.7 6.27
8 Santa Cruz de Tenerife, Spain 13 421 27.00 $2,545 $2,148 21.2 21.7 6.20
9 Larnaca, Kupro 45 707 29.69 $2,834 $1,565 19.5 31.7 6.19
10 Marbella, Spain 56 1,749 38.59 $2,530 $3,684 17.3 48.6 6.16
Seguta guru rekuchamhembe kweItaly dunhu reVeneto, Venice inonzi nhamba yekutanga hotspot yezororo munyika. Inozivikanwa nekuvakwa pamusoro pedhamu rezvitsuwa zvidiki zvinopfuura zana pamahombekombe eAdriatic, chikonzero chikuru ichiti ndiyo nhamba yekutanga yekuenda kuunganidzwa kwakanyanya kwezvinhu zvekuita uye nzvimbo dzekudya nekunwa mukati menzvimbo yayo diki.
Kana iwe uchida imba yezororo kumwe kuine vashanyi vashoma, kwaunogona kunyatso kunyudza iwe nevagari veko, Pafo muCyprus inogona kunge iri sarudzo yakanaka. Guta riri pachinhanho chechipiri nekuda kwemamiriro ekunze eMedithera, ine avhareji tembiricha yepagore ye19.2˚C, pamwe nekuve pakati penzvimbo dzinodhura dzakaongororwa, ine avhareji mutengo weimba paskweya mita yemadhora zana nemakumi masere nemakumi matatu nenomwe.
Abu Dhabi yakatora nzvimbo yechitatu pachinzvimbo, ichiwanawo hutsotsi hwakaderera pane dzese nzvimbo dzakaongororwa, zvakakosha kune avo vanoona kunzwa kugadzikana uye vakachengeteka mudzimba dzavo kure nepamba sekukosha zvakanyanya.
Antalya, Turkey ndiyo nzvimbo ine mutengo wakaderera weavhareji pamwedzi wekurarama we $1,339 yemhuri ine vana. Antalya ndiyo zvakare nzvimbo yekuenda ine mutengo wakaderera wezvivakwa wemadhora mazana manomwe nemakumi matatu paskweya mita.
Kune vanonamata zuva, Las Vegas ndiyo nzvimbo ine mvura yakaderera ye8.9mm inodonha mwedzi wega wega. Nepo Murume muMaldives ane tembiricha yepamusoro ye28.5˚C.